AKHRISO:- Doorashada Shan kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo Maanta ka dhacday Muqdisho | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka AKHRISO:- Doorashada Shan kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo Maanta ka dhacday...
AKHRISO:- Doorashada Shan kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo Maanta ka dhacday Muqdisho
Waxaa Xarunta Dugsiga tababarka ee Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho Maanta ka dhacday doorashada Shan kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo degaan doorashadoodu tahay Gobolada Waqooyi ee Somaliland, iyada oo ay ku tartameen musharrixiin dhowr ah.
Goobta doorashada ayaa waxaa ku sugnaa Guddiga Maamulaya doorashooyinka Gobolada Waqooyi & xubno kamid ah guddiga doorashooyinka heer Federaal & mas’uuliyiin kale oo ka socda dowladda Soomaaliya, iyada oo ay codeynayaan 101 Ergo oo la soo xulay.
Kursiga koowaad ee doorashada Maanta ayaa waxaa ku tartamay Wasiirkii hore ee Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye & Cabdiraxmaan Warsame Saciid, waxaana kursiga Hop225 Golaha Shacabka ku guuleystay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo helay 96 Cod halka Cabdiraxmaan Warsame Saciid uu helay 3 Cod, waxaana halaabay laba Cod.
Kursiga labaad ee HOP202 ayaa waxaa qorshuhu ahaa inay ku tartamaan Aamino Cumar Jaamac iyo Aamino Cismaan Diiriye, hayeeshee Goobta doorashada ay kaga dhawaaqday Aamin Cismaan Diiriye inay tanaasushay, waxana cod gacan tag ah 101 Ergo oo goobta ku sugnaa ay ugu codeeyeen Aamino Cumar Jaamac.
Kursiga Afaraad ee Hop#208 ayaa waxaa ku tartamay Maxamed Haaruun Cabdullaahi iyo Axmed Cali Maxamuud, waxaana 99 Cod ku guuleystay Maxamed Haaruun Cabdullaahi, halka musharrixii la tartamayayuusan helin wax cod ah, waxaana afartii sano ee la soo dhaafay kursigaan ku fadhiyay Xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil.